Nhau DzeBonde Archives - Page 12 of 12 - Nhau Dzevakuru
Ndaida kuti anditundire pamuviri wangu wese kuti ndiite hurume hwekutora ndichinanzva.Ndadzoka kumba apa ndainge ndichibva kuwork enjoying hangu holiday but zemo ndiro rainge rakandirova, ndirikunzwa kuda murume anondisvira zviri hard and asingakurumidze kutunda. Ndakati...
Max - April 6, 2018
Kate ainge anaka nekushanda kwaaiyita to add to her pleasures, ndaitambisa rurimi rwangu mukati mebeche rake ndikanzwa achiita kuridza kamhere apa ndichinanzva juice dzese dzaibuda mubeche rake.It was one of those usual Sundays makuseni ndikamutswa...
Ndainge ndakarara hangu kubeach ndichirohwa nezuva apa ndainge ndazora baby oil ndichiita kupenya ndichiterera hangu mvura ichiyerera mu Ocean. Ndainge ndakavhara hangu maziso ndokubva ndanzwa voice rakakora paside pangu ndokuvhura zvikanzi Hi, apa ndainge...
Pandaikura ndaingovafarira semurume watete. Mari ndaipiwa kudarika vamwe vese ko murume weduka. I kept myself ndiri kavirgin not for him but my mother advised us of only kusvirwa after marriage. Ndakapedza a teaching course...
Nerimwe zuva ndayenda zvangu ku Gym apo ndainge ndatanga kuita ma dance lessons kuti ndigare ndiri fit. Mwana ainge akanaka iyeye and aigona kutamba kunge ndiye akatanga Zumba dance, plus aiwuya ku gym atori...